ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ ဗဟိုနောက်ခံလူအသစ်တစ်ယောက်ဝယ်ယူရန် လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူဟောင်း – Myan Ball
ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ ဗဟိုနောက်ခံလူအသစ်တစ်ယောက်ဝယ်ယူရန် လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူဟောင်း
ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ နောက်ခံလူဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပေါလ်မက်ဂရတ်က နည်းပြဆိုးလ်ရှားဟာ ဗဟိုနောက်ခံလူ အသစ်တစ်ယောက်ဝယ်ယူရန် လိုအပ်တယ်လို့ ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ မက်ဂရတ်က “ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ အရည်အသွေးရှိတဲ့ ဗဟိုနောက်ခံလူအသစ်တစ်ယောက် တစ်ကယ်လိုအပ်နေပါတယ်။
နောက်လမှာ သူခေါ်ယူနိုင်ပါ့မလား မသိပါဘူး ? ဘုတ်အဖွဲ့ကလည်း ပရိသတ်တွေမရှိတဲ့အချိန်မှာ သူတို့နည်းပြအတွက် ပိုက်ဆံထုတ်ပေးနိုင်ပါ့မလား။ ရာသီကုန်မှာအသင်းကို ဆုဖလားတစ်ခုခု ရယူပေးစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အရည်အသွေးရှိတဲ့ နောက်ခံလူတစ်ယောက်လိုအပ်နေပါတယ်။
မဟုတ်ရင်တော့ လက်ဗလာနဲ့ပဲ ထပ်နေပေါ့။ မနှစ်က ဆိုးလ်ရှားဟာ ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာ အသင်းအတွက် အရေးပါတဲ့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်လို ကစားသမားမျိုးကို ခေါ်ယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလာမယ့် ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွှေ့မှာ နောက်ထပ်အရေးပါတဲ့ နောက်ခံလူကို ခေါ်ယူသွားနိုင်မလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမယ်” လို့ ပြောသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုးလ္ရွားအေနနဲ႔ ဗဟိုေနာက္ခံလူအသစ္တစ္ေယာက္၀ယ္ယူရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ ဆိုလိုက္တဲ့ ယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ ေနာက္ခံလူေဟာင္း
ယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ ေနာက္ခံလူေဟာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ေပါလ္မက္ဂရတ္က နည္းျပဆိုးလ္ရွားဟာ ဗဟိုေနာက္ခံလူ အသစ္တစ္ေယာက္၀ယ္ယူရန္ လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာသြားခဲ့ပါတယ္။ မက္ဂရတ္က “ ယူႏိုက္တက္အသင္းဟာ အရည္အေသြးရွိတဲ့ ဗဟိုေနာက္ခံလူအသစ္တစ္ေယာက္ တစ္ကယ္လိုအပ္ေနပါတယ္။
ေနာက္လမွာ သူေခၚယူႏိုင္ပါ့မလား မသိပါဘူး ? ဘုတ္အဖြဲ႕ကလည္း ပရိသတ္ေတြမရွိတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔နည္းျပအတြက္ ပိုက္ဆံထုတ္ေပးႏိုင္ပါ့မလား။ ရာသီကုန္မွာအသင္းကို ဆုဖလားတစ္ခုခု ရယူေပးေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ အရည္အေသြးရွိတဲ့ ေနာက္ခံလူတစ္ေယာက္လိုအပ္ေနပါတယ။
မဟုတ္ရင္ေတာ့ လက္ဗလာနဲ႔ပဲ ထပ္ေနေပါ့။ မႏွစ္က ဆိုးလ္ရွားဟာ ဇန္နဝါရီအေျပာင္းအေရႊ႕မွာ အသင္းအတြက္ အေရးပါတဲ့ ဘ႐ူႏိုဖာနန္ဒက္စ္လို ကစားသမားမ်ိဳးကို ေခၚယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုလာမယ့္ ဇန္နဝါရီအေျပာင္းအေရႊ႕မွာ ေနာက္ထပ္အေရးပါတဲ့ ေနာက္ခံလူကို ေခၚယူသြားႏိုင္မလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္” လို႔ ေျပာသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလူစာရင်းနဲ့ ဆိုရင် ယူနိုက်တက်အသင်း ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုလိုက်တဲ့ ကစားသမားဟောင်း